बागलुङ सहकारीबाट सन्चालित सुपथ मुल्यको पसलका बारेमा के भन्छन अध्यक्ष राजभण्डारी ? – ebaglung.com
बागलुङ सहकारीबाट सन्चालित सुपथ मुल्यको पसलका बारेमा के भन्छन अध्यक्ष राजभण्डारी ?
२०७५ असार १८, सोमबार ०७:१९	Footer Slider, Top News, अन्य समाचार, थप समाचार, विविध
बागलुङ २०७५ असार १८ । बागलुङ जिल्ला सहकारीको क्षेत्रमा अग्रस्थानमा रहेको छ । यसलाई सहकारीको जिल्ला भने फरक नपर्ला । जिल्लाका प्रत्यक गाउँ गाउँमा सहकारी संस्थाहरु सन्चालित छन । सदरमुकाममा मात्र नभएर जिल्लाका प्राय सबै जसो व्यापारिक केन्द्रहरुमा सहकारी संस्थाहरु विशेष क्रियाशील रहेका छन् । सहकारी संस्थाका शेयर सदस्यहरुवीच ऋण प्रवाह गर्ने मात्र नभएर पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरुले आफ्नो कार्य क्षेत्रलाई स्वास्थ्य र सन्चार क्षेत्रमा समेत बिस्तार गरेका छन् ।
टेलिभिजन, रेडियो, पत्रिका, केबुल लगायत सन्चार माध्यमहरु सन्चालन गर्ने उद्देश्य सहित दर्ता गरिएको एक सहकारी संस्थाले यसको शेयर सदस्य बन्नेहरुको रकम सहित उनिहरुकको तस्वीर सामाजिक सन्जालमा छ्याप्छ्याप्ती देखिएको थियो अर्थात पछिल्लो समय सन्चार क्षेत्रप्रति सहकारी संस्थाहरु निकै आकर्षित देखिएका छन् ।
यसैवीच बागलुङ सदरमुकामा रहेको बागलुङ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले भने उपभोक्ताहरुको हितलाई ध्यानमा राखी सुपथ मुल्यको पसल सन्चालनमा ल्याएको छ ।
संस्थाका अध्यक्ष अशोक राजभण्डारीका अनुसार मुल्य नियन्त्रित राख्न र कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन नदिन सुपथ मुल्यको पसलले सहयोग पुयाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
सुपथ मुल्यको पसलमा जिल्लामा स्थानीयरुपमा उत्पादित डालीहरु देखी दैनिक उपभोग्यबस्तुहरु रहेको उनले बताए । सहकारीबाट सन्चालित सुपथ मुल्यको पसल शेयर सदस्यहरुका लागि मात्र नभएर आम उपभोक्ताहरुका सुविधाकालागि भएको पनि ईबागलुङ संगको कुराकानीमा अध्यक्ष राजभण्डारीले खुलासा गरेका छन् ।
उनले संक्षेपमा बागलुङ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको बिगत र वर्तमानको यथार्थ जानकारी दिँदै सहकारी प्रति आफ्नो प्रष्ट धारणा पनि बाहिर ल्याएका छन् ।
प्रस्तुत छ, ईबागलुङका फोटो सम्पादक किरण आचार्य र सहकर्मी कुसुम थिङले अध्यक्ष राजभण्डारी संग गरेको कुराकानी ।
कुवेतमा नेपाली महिलाको अवस्था अज्ञात, मन्त्री विष्टको ध्यानाकर्षण !
मिलो अन्तर्राष्ट्रिय कराँतेमा नेपाल तृतिय !